Qiyaamaa Archives - Ibsaa Jireenyaa
December 20, 2019 Sammubani One comment
Gaafin guddaan namoonni Ergamtootaa gaafataa turan keessaa tokko, “Qiyaamaan yoomi? Qiyaamaan jettu kuni yoom dhuftii?” Gaafi akkanaatin of ko’oomsu fi deebii barbaaduf garmalee carraaqun ni barbaachisaa sila? Gaafi kanaaf deebii argachuun dhugummaa Qiyaamaa jijjiruu danda’aa? Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ogummaa fi rahmata Isaatiin Yeroo Qiyaamaan itti dhootu uumamtoota hundarraa dhokse.
Waa’ee Guyyaa Qiyaama itti fufuun warri ibidda seenan falmii akkami akka adeemsisan muraasa isaanii haa ilaallu. Falmiin kuni falmii geeybii dhugaadhaan gara fuunduraatti dhufuudha. Sababni isaas, odeefannoo Rabbal aalamiina irraa dhufeedha. Geeybi jechuun wanta dhokataa namarraa fagoo ta’e yookiin ammatti ijaan kan hin argine yookiin sammuu fi qaamoleen miiraa bira gahu kan hin dandeenyedha. Haguuggin ilma namaa fi geeybi jidduu jiru wantoota afur keessaa tokko ykn hunda isaanitu ta’u danda’u. Haguuggin kunniinis: (1). Yeroo darbee fi kan dhufu, (2) fagaachu bakka, (3) dadhabbinna qaamolee miiraa fi (4) girdoon jiraachu. Wanti darbee fi gara fuunduraatti dhufu namaaf geeybidha. Read more
Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu obboleeyyan koo? Jireenyi badhaadhaa? Eeti, jireenyi badhaatu taati yoo nuti imaana (amantii) guyyaa Qiyaamatiif qabnu daballee fi hojii gaggaarii hojjanne. Guyyaa Qiyaamatti amanuun wanta nama horii irraa adda baasudha. Sababni isaas, Guyyaan Qiyaamaa gahuumsi ilma namaa eessa akka ta’e murteessa. Akkasumas, namoonni wanta fagoo fi ammatti ijaan hin mul’annetti amanuun horii irraa addaan bahuu. Jireenyi addunyaa tanaa gabaabdu fi iddoo qormaatati. Dhalli namaa jireenya addunyaa tanatti qoramuun Guyyaa Qiyaamaa bu’aa (firii) qormaata isaa ni arga. Namni qoramee bu’aa qormaata isaa yoo hin argin faaydan qoramu maali ree? Kanaafu, Guyyaa Qiyaamaa akka dhufu kanarraayis hubachuun ni danda’ama. Ilmi namaa addunyaa tana keessatti qorame akkanumatti kan hafuu miti. Kufaati fi milkaa’inni isaa Guyyaa Qiyaamaa ni beekkama. Akkasi mitiree? Read more
Gaafiin “Guyyaan Qiyaamaa yoomi?” Jedhu gaafi yeroo durii irraa kaase hanga ammaatti itti fufaa jiruudha. Seenaa keessatti namoonni amanti adda addaa irraa “Dhumti addunyaa (Guyyaan Qiyaamaa) bara kanatti ni dhufa” jechuun tilmaama ragaa hin qabne kaa’ani jiru. Guyyaan Qiyaaman dhufuu keessa shakkiin hin jiru. Kanaafu, Guyyaan Qiyaamaa Yoomi ree? Gaafi kana deebisuuf Qiyaama bakka lamatti qoodu dandeenya. al-Qiyaamatus sughraa (Qiyaamaa Xiqqoo) fi al-Qiyaamatul kubraa (Qiyaamaa Guddoo). Qiyaamaan xiqqoon “Du’a” nama kamiyyuu irratti dhuftuudha. Qiyaaman Guddoon immoo kan Rabbiin fedhe malee wantoonni dachii fi samii keessa jiran itti dhumanii fi ergasii lamuu kaafamaniidha. Read more
Yeroo darbee keessa mallatolee Guyyaan Qiyaamaa dhiyaachu agarsiisanii fi akka Guyyaa kanatti amanne of qopheessinuuf nu gargaaran ilaalle jirra. Mallatoolee Guyyaa Qiyaamaa xixxiqoo hafanii fi Mallatolee Gurguddoo ilaaluf yeroo fi bakki nutti gabaabbata. Akkasumas, dubbistoota baay’ee hin argine akkuma kutaa lamaffaa irraa hubatametti. Garuu bakka kanaa qabxiilee baay’ee ijoo fi jireenya keessatti baay’ee barbaachisoo ta’an ilaalla. Qabxilee kanniin xiqqaate xiqqaatu bakka torbatti qoode jira. Isaanis: Qiyaaman Maaliif barbaachise? Ragaaleen Qiyaamaa maal fa’a? Seenaa irraa namoonni fi uumamtoonni biroo erga du’anii booda kaafamanii jiruu? Guyyaan Qiyaamaa yoomii? Wantoonni Guyyaa Qiyaamaa keessa adeemsifaman maal fa’aa? Badhaasa nama Qiyaamatti amane fi adabbii nama itti kafare maal ta’aa? Shakkii sheyxaanaa jalaa bahuuf maal gochuu qabnaa? Read more